အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု (စာအုပ်) | Save Burma
မဟာဗျူဟာ အခြေခံအချက်များကို စဉ်းစားပုံ
မြန်မာဘာသာပြန် download this URL
ဤစာအုပ် တအုပ်လုံးကို Burma Digest website တွင် ၂၀၀၆ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှစ၍ အပတ်စဉ် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
မူရင်း စာရေးသူ၏ မှတ်ချက်နှင့် နိဒါန်း အပါအ၀င် ဘာသာပြန် တအုပ်လုံးကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် အင်တာနက်ပေါ်မှ ကူးယူနိုင်ပါသည်။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။
Thanks, Mr Robert L. Helvey to give meapermission to translate your book into Burmese.
Also thanks to Dr Tayza to publish it on your Burma Digest website.
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Download English
You may order .